How'd it happen and more reports?: ပြည်ကြီးငါးသုပ်
squid သုပ် (ရခိုင်အတု စတိုင်)
ရခိုင်နည်းကို အခြေခံသုပ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် ပါဝင်ပစ္စည်း နှင့် လုပ်နည်းအချို့ အနည်းငယ်ကွာဟမှုရှိတာကြောင့် မဟုတ်ဘူး၊ မှားနေတယ်ဆိုတာ မဖြစ်ရအောင် ရခိုင်အတု စတိုင်လို့ ကြိုတင်ပြီး အမည်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
***... squid သုပ်ရန် အတွက် လိုအပ်တာလေးတွေ…
1. ၃ လက်မ အရှည်ခန့်အရွယ် squid – ၁၀ ကောင်
2. ငရုတ်သီးစိမ်း – ၁၀ တောင့်
3. ကြက်သွန်ဖြူ အတက်ကြီး – ၃ တက်
4. စိမ်းစားငပိ – ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်းခန့်
5. ပါးပါးလှီးကာ ရေဆေးထားသော ကြက်သွန်နီ – 2/3 cup (180 ml) ခန့်
6. ပါးပါးသေးသေး အတုံးလေးများလှီးထားသော သခွါးသီး – 2/3 cup (180 ml) ခန့်
7. ခပ်ကြမ်းကြမ်းလှီးထားသော နံနံပင် – 1/4 cup (60 ml) ခန့်
8. squid ကို အိုးပူတိုက်ရာမှ ထွက်လာသည့် အရည် – ထမင်းစားဇွန်း (၄) ဇွန်းခန့်
9. ငါးငံပြာရည် – ထမင်းစားဇွန်း ၃ ဇွန်း
10. သံပုရာရည် – ထမင်းစားဇွန်း ၂ ဇွန်း
11. ငရုတ်ကောင်းမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ပုံ ၁ ပုံခန့်
ခေါင်းဖြုတ် သန့်စင်ဆေးကြောကာ ရေစစ်ထားသော squid များကို ဒယ်အိုးထဲထည့်ကာ ရေ နှင့် ဆီ လုံးဝမထည့်ပဲ high heat ဖြင့် ၃ မိနစ်ခန့် အိုးပူတိုက်ပေးပါ။ ပြီးလျှင် အိုးအပူရှိန်ကြောင့် ပိုကျက်ကာ ပိုကျုံမသွားစေရန် ချက်ချင်း ဒယ်အိုးမှ ဆယ်ထုတ်ပြီး အအေးခံထားပါ။
အိုးထဲတွင် ကျန်နေသော squid မှထွက်လာသည့် အရည်များ အရမ်းများနေလျှင် ထမင်းစားဇွန်း (၄) ဇွန်းလောက်ခန့် ကျန်သည်အထိ ဆက်တည်ပေးထားပါ။
စိမ်းစားငပိကို ပန်းကန်ပြားထဲထည့်ကာ paper towel ဖြင့် ဖုံး၍ mirowave ထဲ စက္ကန့် ၃၀ ခန့် ထည့်ပါ။ (သို့) မီးကင်ပေးပါ။
ငရုတ်သီးစိမ်း နှင့် အနည်းငယ်ပါးအောင်လှီးထားသော ကြက်သွန်ဖြူ ကို မီးအေးအေးဖြင့် အတန်အသင့် မီးကျွမ်းအောင် လှော်ပေးပြီး စိမ်းစားငပိဖြင့် တွဲထောင်းထားပါ။
ပြီးလျှင် ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံး ဇလုံထဲထည့်ကာ ခပ်ဖွဖွရောနယ် သုပ်ပြီးသည့် squid သုပ်လေးကို ကောက်ညင်းပေါင်းဖြင့် တွဲဖက်ကာ စားနိူင်သလို၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သလို အရသာရှိစွာ သုံးဆောင်နိူင်ပါပြီ။
Posted by Ko Nge at Tuesday, September 30, 2014